Maxamed C/risaaq “Kenya iyo Soomaaliya waa ku qasban yihiin inay soo celiyaan xiriirkooda” • CNN Somali
HomeSomaliaMaxamed C/risaaq “Kenya iyo Soomaaliya waa ku qasban yihiin inay soo celiyaan xiriirkooda”
December 21, 2020 cnnsomali Somalia, Wararka Maanta 0
Mogadishu (CNN SOMALI) Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Maxamed C/risaaq oo galabta shir jaraa’id ku qabtay Madaxtooyada Villa Somalia, kaddib markii wafdigii uu hoggaaminayay Madaxweyne Farmaajo ka soo laabteen dalka Jabuuti oo uga ka qeyb galeen shir Madaxeedka IGAD.
Shirka jaraa’id ee Wasiir Maxamed C/risaaq ayuu uga warbixiyay shirkaas iyo shirar gaar gaar ah oo ay yeesheen Madaxda IGAD.
Mar uu ka hadlayay arrinta Soomaaliya iyo Kenya ayuu sheegay in Madaxda IGAD ay ku cadaadiyeen Soomaaliya in arrinta lagu xalliyo IGAD dhexdeeda.
“Madaxda IGAD waxay aad cadaadis ugu saareen Soomaaliya in arrinta Kenya uu noqdo mid lagu xalliyo IGAD dhexdeeda, oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo is afgarad, oo halkaas arrimaheena ku xallino, tallaabada ugu horeysa ay tahay in xaalada la dejiyo iyo xiisadda, Soomaaliya taas waa ogolaatay, laakiin waxaa ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya ka ashtakooneysay”ayuu yiri Wasiirka.
Waxaa uu sheegay in arrinta ay qabaan ee ah in Kenya ay jabhado ku soo abaabuleyso dhinaca xuduuda ay Urur Goboleedka IGAD go’aan ku gaareen in guddi xaqiiq raadin loo saaro arrintaas.
Mar uu ka hadlayay xiriirka labada dal in la soo celinayo ayuu ku gaabsaday in Kenya iyo Soomaaliya xiriir lahaan jireen ayna u lahaan doonaan sidii ay horay ugu lahaayeen.
“Dad badan waxaa laga yaabaa inay ka walwalsan yihiin Soomaaliya iyo Kenya in xiriirkooda xumaaday laakiin waxaa ogaataan Kenya iyo Soomaaliya waa labo dal oo deris ah inay yihiin, xiriir aad u dheer uu ka dhaxeeyo, dad badan Soomaali iyo Kenyan ah ay faa’ido u leedahay xiriirka oo wanaagsanaada, Kenya iyo Soomaaliya ay ku qasban yihiin inay soo ceshadaan xiriirkooda, waqtiga ay munaasabka tahay sida ugu munaasibsan oo uu ku doo noqonaayo xiriirkaas”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa cadaadis xooggan kala kulmay Madaxda IGAD go’aanka Soomaaliya qaadatay ee xiriirka ugu jartay, iyadoo Soomaaliya ay dacwad ka dhan ah Kenya u gudbisay IGAD.
Si kastaba ha ahaatee Madaxweyne Farmaajo ayaa ka soo hoynin Shirkii IGAD guul siyaasadeed, gaar ahaan arrinta khilaafka Kenya iyo Soomaaliya oo uu doonayay in shirka IGAD uu qeyb ka noqdo ajandayaasha looga hadlayo, hase ahaatee qodobkaas lagu xalliyay shir doceed haar ah oo ay dhex dhexaadiye ka ahaayeen Madaxda dalalka Jabuuti iyo Itoobiya.
Xiisad dagaal oo aad u kacsan ee Somaliya & Kenya ka dhex aloolsan tay